ရေးသားသူ may16 at Sunday, May 16, 2010
အိအိချော May 16, 2010 at 3:43 PM
မေလေးရယ် ... မွေးနေ့မှာ အခုလိုမျိုးကုသိုလ် တွေလုပ်ခွင့်ရတော့ (အထူးသဖြင့် အသက်ကြီး ရွယ်အိုတွေကို အစားအသောက်လှူဒါန်းရတာ ဟာ) ပိုမို မွန်မြတ်ပါတယ်ကွယ်
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 16, 2010 at 5:08 PM
မွေးနေ့အလှူအကြောင်းလေး ဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးလိုက်တာ
ဒီနေ့မှစလို့ ပျော်စရာ ရက်ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ
ချစ်သူခင်သူများနဲ့ ထာဝစဉ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေ
တောသားလေး May 16, 2010 at 8:29 PM
မွေးနေ့မှာ ခုလိုသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ပူဇော်ကန်တော့
မွေးနေ့မှာပျော်ရွင်ပါစေ၊ စာပေများကိုလည်း ယခုထက် ပိုပြီးရေးသားအကျိုးပြုနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့မှာဆုတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော် May 16, 2010 at 9:21 PM
သာဓု . . သာဓု . . သာဓု ပါဗျာ။
အနမ်း May 16, 2010 at 10:37 PM
ညီမရေ.. Happy Birthday ! ပါနော်။
မွေးနေ့ ကုသိုလ်လေးအတွက်လည်း သာဓု ၃ကြိမ်ခေါ် ပါတယ်။
မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်များတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း ပြည့်စုံပြီး စာကောင်းပေကောင်းများဆက် လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
မောင်ကောင်း May 17, 2010 at 5:21 AM
သာဓုပါအစ်မရေ.. မွေးနေ့လုပ်တဲ့ပုံလေးတွေ ကြည့်မိပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီ အသက်ဂုဏ်ဝါကြီးတဲ့သူတွေကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မွေးနေ့မှာဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့အလုပ်တွေ များများလုပ်ရင်း အစ်မတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..။
Waing May 17, 2010 at 7:24 AM
မမေရေ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ
တောင်ပေါ်သား May 17, 2010 at 9:51 AM
Happy Birthday !!!! ပါး) မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
အမေ့လက်ရာ May 17, 2010 at 1:20 PM
တို့လည်း..မဖိတ်ပါလား။ နောင်ရိုး မှာ လက်ဘက်ရည် တိုက်မယ် ထင်လို့ မနက် ၆ နာရီထဲက သွား ထိုင်
စောင့်နေတာ ၊ လက်စ သတ်တော့ ..ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ သွားလှူတာကိုး။ သာဓု ၃ကြိမ်ပါဗျား။
Younggun May 17, 2010 at 11:53 PM
နောက်ကျ မွေးနေ့ ဆုတောင်းဖြစ်သွားတယ် မမေရေ..။ အလှူဒါနတွေအတွက် သာဓုအနုမောဓနာ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ နောင်လဲ လှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေ။ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ကုသိုလ်တရား ပွားများနိုင်ပါစေဗျာ။
mabaydar May 18, 2010 at 4:03 AM
ညီမရေ.. မွေးနေ့မှာ ပါတီတွေလုပ်ပြီး ပျော်ပါးတာထက်... ခုလိုမျိုး ကုသိုလ်ရေးလုပ်လို့ ရတဲ့ ကြည်နူးမှုက အရမ်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်... သာဓု.. သာဓု.. သာဓုပါ... နောက်လဲ ခုလို လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ...
ဇွန်မ May 18, 2010 at 11:02 AM
အမမေ ထူးမြတ်တဲ့ ရက်မြတ်မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် sorry နော်။ ရင်ထဲက ဆန္ဒနဲ့မို့ နောက်ကျပေမဲ့ အမနားလည်ပေးမှာပါနော် " အမမေရဲ့ ထူးခြားမွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်ဒါနလေးအတွက် သံသရာဝဋ် ဆင်းရဲမှ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်မရောက်မီ စပ်ကြား ဘဝပေါင်းများစွာမှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ပါစေ" ....
မမေ May 18, 2010 at 11:29 AM
မွေးနေ့ကုသိုလ်လေးကို မျှဝေရင်း...မောင်နှမများရဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးမှုကြောင့် ၀မ်းသားကြည်နှုးရပါတယ်။ မမေနဲ့အတူ မောင်နှမများလည်း ကုသိုလ်များ ထပ်တူထပ်မျှရကြပါစေ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ လို့ ပြည်လည် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
Angel Shaper May 18, 2010 at 1:44 PM
ဘဝနှင့် ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျနိူင်ပါစေ။
ပန်းခင်းလေး May 20, 2010 at 8:18 AM
မွေးနေ့ မှာ အခုလို ကြည်နူးခဲ့ ရတယ်ဆိုတာ
သိရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်မမရေ
ဘ၀မှာ ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေနဲ့ အတူ
မေအိ May 21, 2010 at 2:04 PM
မွေးနေ့တူတဲ့ မမ လား ညီမလေး လား တယောက်ရေ
ကုသိုလ်တူတူ လာယူပါတယ်ရှင် ..
သဒ္ဓါလှိုင်း May 22, 2010 at 2:01 PM